Waa tee kooxda ay Arsenal wadahadallada la furtay si ay u siiyaan Mesut Ozil? | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Waa tee kooxda ay Arsenal wadahadallada la furtay si ay u siiyaan Mesut Ozil?
London(SONNA)-Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa inay wadahadallo la furtay naadiga Fenerbahce si ay ugala xaajoodaan suurto-galnimada heshiis amaah ah oo uu laacibkooda khadka dhexe ee Ozil ku aado halkaas.
30-sano jirkaan kaasoo la rumeysan yahay inuu xiriir adag la leeyahay macallinka Gunners ee Unai Emery ayaa kaliya labo kulan u saftay xilli ciyaareedkan kooxda ka dhisan Waqooyiga Magaalada London.
Ciyaaryahankii hore ee Real Madrid ayaa la la xiriirinayey inuu u dhaqaaqi doono Kooxda Ersun Yanal suuqii xagaaga, laakiin mushaharkiisa oo ah mid sare ayaa loo maleynayay inuu caqabad ku ahaa wadahadallada.
Yeelkeede, Wargeyska Turkiga ka soo baxa ee Takvim ayaa warinaya in agaasimaha Fenerbahce ee Damien Commoli uu haatan wadahadallo kula jiro Gunners, kaasoo ku saabsan heshiis amaah ah oo ay labada koox ku kala qeybsanayaan mushaharka Ozil.
Xiddigii hore ee xulka qaranka Jarmalka ayaa hore u sheegay inuu jeclaan lahaa inuu u ciyaaro Fenerbahce mar uun xirfadiisa ciyaareed, maadaama ay ahaayeen kooxdii uu taageerenimadeeda ku soo barbaarey isagoo ah wiil yar.
Previous articleKooxda Manchester City oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Kalidou Koulibaly
Next articleJuventus oo bartilmaameedsanaysa bisha Janaayo xiddig ka tirsan Kooxda Chelsea
Marocco iyo Guinea oo guulo ka gaaray tartanka kubadda cagta ee qaaradda A...
Naciima Cabdi Sacid - January 10, 2022 0
Senegal oo si dirqi ah uga badisay Zimbabwe
Cayaartooyda Hayland oo Muqdisho soo gaaray
Agaasimaha SONNA - August 29, 2021 0